Malagasy MARIKY NY BIBI-! Ao amin'ny bokin'ny Apokalypsy (ny boky farany ao amin'ny Baiboly Masina) isika Nampitandrina mafy nandray ny mariky ny bibi-(i.e. ny antikristy!). Fa inona marina ny mariky ny bibi-dia? Ary no marika manana na inona na inona ny ifandraisany amin'ny anaran'ny bibi-dia, na ny isa 666? Na, dia ny mariky ny bibi-zavatra samy hafa tanteraka & misaraka amin'ny anaran 'ny bibi-dia sy ny isa 666? Ary inona marina no anaran'ny bibi-dia ihany? Moa ny olona, ​​firenena, maromaro ny firenena, na ny fiangonana? Ary ahoana ny marika izany-no ara-bakiteny, ara-batana MARK? Sa izany fa manana an'ohatra, heviny ara-panoharana? Aoka isika hanomboka eny amin'ny fikatsahana ny hamaly ireo fanontaniana ireo amin'ny alalan'ny voalohany fiverenana amin'i Apokalypsy 13: 16-17. Eto isika dia nilaza fa ny bibi-dia "tsy maintsy ny rehetra-ny kely na ny lehibe, na ny manan-karena na ny malahelo, malalaka sy andevo-mba homena ny marika eo amin'ny tànany ankavanana na eo amin'ny handriny. Ary tsy misy afaka hividy na hivarotra na inona na inona tsy misy izany MARKA, izay na ny anaran'ny bibi-dia na ny isan'ny  maneho NY ANARANY "(DIEM). Koa amin'izany Soratra Masina izany no mahatonga azy mazava tsara fa ny mariky ny bibi-dia tsotra na ny anaran'ny bibi-dia, na ny isan'ny izay maneho ny anarany. Noho izany, manana ny mariky ny bibidia eo aminao no misy mitovy amin'ny manana ny anaran'ny bibi-dia anao (na ny isa izay maneho ny anarany-666!). NUMER BIBI-666! Nahoana anefa ny isa 666? Ahoana no misolo tena isa ny anarany? Eny ary, andao aoka ny Baiboly hamaliana izany. Apokalypsy 13:18 (lb) - "... ny isa soatoavina ny taratasy tamin'ny anarany hanampy 666." mazava tsara io andinin-teny mampiseho fa 666 fotsiny ny isa isa hasarobidin'ny ny anaran'ny bibi-dia! Ohatra, raiso ny anarana "VIX." Raha mampiasa "tarehimarika romanina" dia V = 5, I = 1, & X = 10. Ary raha hametraka ny isa ilaina ny taratasy tsirairay avy amin'izany anarana (5 + 1 + 10) isika, mahazo 16. noho izany, Vix tsy mety ho ilay bibi-dia, satria ny anarany ihany no manampy hatramin'ny 16 (raha ny anaran'ny bibi-dia hanampy hatramin'ny 666). Fa raha tsy Vix dia ny bibi-dia, izay? IZA ILAY BIBI-DIA? Koa iza indray moa Izao Beast (i.e. ny Antikristy)? Moa ny United Eoropa Superpower (ho velona indray "Masina" Fanjakana Romanina) toy ny sasany hampianatra? Sa ilay bibi Mpitarika ity tontolo velona indray? Ary ny bibi-dia an'ohatra roa, na ny fanjakana sy ny mpitarika! Fa voalohany indrindra dia mijoro ho ny mpitarika azy. Mba hanaporofoana fa mijoro ho amin'ny farany-fotoana mpitarika ara-politika ity tontolo ho avy tsy ho ela-dia aoka ny mitodika any hafa Soratra Masina ao amin'ny bokin'ny Apokalypsy. Apokalypsy 19: 20- "Ary ny bibi-dia voasambotra, ary niaraka taminy ny mpaminany sandoka .... Roa ireo dia natsipy velona ho any amin'ny farihy afo mirehitra solifara izy roroa "(NKJ). Ity Soratra Masina dia mampiseho mazava fa ny bibidia iray andro farany olona, ​​fa dia izy sy ny mpaminany sandoka dia hatsipy any amin'ny farihy afo! ARA-BAKITENY, ARA-BATANA MARK? Fa inona marina no mariky ny bibi-dia, ny mariky ny andro farany ity mpitarika ara-politika? Moa ve izany ho ara-batana, ara-bakiteny MARK (na dia marika ity fanoharana fotsiny, manana karazana nafenina, mifono zava-miafina dikany)? Ny mariky ny bibi-dia antoka ho ara-bakiteny marika ara-batana! Ao amin'ny Apokalypsy 13:16 & 14:11 maro samy hafa ao amin'ny Baiboly fandikan-teny (GW, NOG, EXB, NEB, & ny Kat) fanjakana fa ny mariky ny bibi-dia ho "marika" eo amin'ny olombelona. Ny AMPC, DIEM, & ny EXB fanjakana fa ny mariky ny bibi-dia nanorotoro ny olona. Fa Tiako ny fomba mandika Baiboly ny Velona andininy roa ireo ny tsara indrindra, araka ny manambara fa ny mariky ny bibi-dia ho "tatoazy" ao amin'ny olombelona! Fa na inona na inona raha ny mariky ny bibi-dia notombohina tamin'ny vy, tsy laniny, na ny tatoazy, ireo fandikan-teny rehetra niara-manaiky fa ny marika ara-bakiteny ho BATANA MARKA fa ny hafa dia mora foana ho afaka hahita! MANDRAY MARKA = HIVADIKA SATANA! Raha mamaky ny bokin'ny Apokalypsy tena tsara (indrindra fa ny toko faha-14) dia ho tsikaritrao fa na iza na iza izay VONONA mandray ny mariky ny bibi-dia ho voasazy mafy noho Andriamanitra. Fa Andriamanitra tokoa Tsy hamaly ny olona iray izay manana marika io voatery aminy ara-batana, na dia Izy hamaly olona iray izay tsy nahy no mandray io marika (toy ny sasany tsikombakomba mampianatra)! Ny olona manana ny minia, VONONA MANAIKY MIHITSY NY MARK. Fa izay tsitrapo sy minia mamela ny mariky ny bibi mba hapetraka ny na ny vatany (na eo amin'ny tànany ankavanana na eo amin'ny handriny) no handeha mivantana an'Andriamanitra! Fa tsy nankatò ny Mpamorona, dia tokony ho nankatò i Satana! Izy ireo amin'ny ankapobeny ho pledging ny tsy hivadika sy ny tsy fivadihany tamin'i Satana Devoly (jereo Apok 13:16 in na ny DIEM & EXB fandikan-teny ao amin'ny Baiboly)! Ary ireo izay manao izany dia ho voasazy mafy noho Andriamanitra! Ary izy ireo dia tsy manan-kalahatra, fa tsy hisy vavolombelona roa (na ny mpaminany) izay milaza azy ireo tsy mba miankohoka eo anoloan'ny bibi (na ny sarivongana) na mandray ny marika, fa nisy anjely avy tany an-danitra Ary hodidiako ny mponina amin'izao tontolo izao tsy mba manao toy izany (Apokalypsy 14: 9)! ANARAN'NY BIBI-DIA? Noho izany, inona no anaran 'ny bibi-dia? Ary iza no izao andro farany mpitarika ara-politika ho? Na iza na iza izy, zavatra iray fantatsika azo antoka, ny taratasy ny anarany dia hanampy hatramin'ny 666! Fa mety misy mieritreritra ny tsara kokoa noho ny ROMANINA anarana? Voalohany indrindra, "ROMANINA" dia azo adika hoe "LATEINOS" ao amin'ny teny grika. (Fa nahoana no mampiasa ny teny grika? Satria ny ankamaroan'ny amin'ny Testamenta Vaovao tany am-boalohany nosoratana tamin'ny teny grika, anisan'izany ny bokin'ny Apokalypsy). Ao amin'ny teny grika "L" mampiseho ny isa 30, "A" dia 1, "T" dia 300, "E" dia 5: "Izaho" dia 10, "N" dia ny 50, "O" dia 70, ary " S "no 200. Add azy (30 + 1 + 300 + 5 + 10 + 50 + 70 + 200) ary inona no mahazo? 666! Faharoa, raha ny anarany dia "ROMANINA," dia ho toy izany koa ny amin'ny Andriamanitra telo izay iray ho foto-pampianarana araka ny telo hisolo tena zavatra iray. Tsy vitan'ny hoe mety ho ny anaran 'ity-fotoana farany mpitarika ara-politika, fa izany koa no hisolo tena ny Fanjakana Romanina, ary koa ny Romanina (Katolika) Fiangonana. FAMPITANDREMANA! Na inona na inona ataonao amin'ny hoavy, ka tsy (na inona na inona toe-javatra na inona na inona!) Mandray ny mariky ny biby na hivavaka aminy (i.e. ny Antikristy) na ny sarivongana !!! "Rankizy, izao no ora farany; ary tahaka ny efa renareo ... ny antikristy ho avy ... Ny olona ny ota ... ny zanaky ny fahaverezana, izay manohitra ka manandra-tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra, na izay ivavahana ... Ho mihitsy aza mipetraka ao ny tempolin'Andriamanitra, nilaza ny tenany ho Andriamanitra "(1 Jaona 2:18 NKJ, 2 Tes. 2: 3-4 NKJ; 2 Tes. 2: 4 DIEM). "Avy eo izy dia nanokatra ny vavany hiteny ratsy an'Andriamanitra izy, dia ny hiteny ratsy ny anarany, ny tabernakely, ary ireo izay mitoetra any an-danitra. Ary navela ho azy mba hiady tamin'ny olona masina [TENA Kristianina] sy handresy [handresy] azy ireo. Sy ny fahefana nomena azy ny isam-pirenena, samy hafa fiteny, ary ny firenena. Ary izay rehetra monina ambonin'ny tany hivavaka aminy, izay ny anarany no tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ... "(Apokalypsy 13: 6-8 NKJ). "Raha misy miankohoka eo anoloan'ny bibi [i.e. ny Antikristy] sy ny sariny [i.e. ny sarivongana], ka mandray ny marika eo amin'ny handriny na amin'ny tànany, dia izy koa no hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra, izay naidina hery feno ho any amin'ny kapoaky ny fahatezerany. Ary hampijalina amin'ny afo sy solifara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny Zanak'ondry [i.e. Jesoa Kristy]. Ary ny setroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay mandrakizay; ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohoka eo anoloan'ny bibi-dia sy ny sariny, na izay mandray ny mariky ny anarany "(Apokalypsy 14: 9-11 NKJ). Raha mila fanazavana fanampiny momba ny mariky ny bibi-dia, azafady vakio "Apokalypsy Tonga Velona", ary "Ny antikristy & The Farany 7 taona." Ireo boky azo alaina maimaim-poana ao amin'ny: www.TheBibleComesAlive.com malagasy = malagasy Raha te-hamaky na ny lahatsoratra na boky amin'ny fiteninao, tsindrio fotsiny ny rohy manaraka ity: https://translate.google.com. Ity rohy ity dia handika ny asa sorany rehetra avy amin'ny teny anglisy ny teny. Fa mety ihany mandika 1 pejy amin'ny fotoana. — Other Books & Articles in Your Language — If you would like to read any of my articles or books in your language, just click on the following link: https://translate.google.com. This link will translate all of my writings from English to your language. But it can only translate 1 page at a time.
MARIKY NY BIBI-!
Ao amin'ny bokin'ny Apokalypsy (ny boky farany ao amin'ny Baiboly Masina) isika Nampitandrina mafy nandray ny mariky ny bibi-(i.e. ny antikristy!). Fa inona marina ny mariky ny bibi-dia? Ary no marika manana na inona na inona ny ifandraisany amin'ny anaran'ny bibi-dia, na ny isa 666? Na, dia ny mariky ny bibi-zavatra samy hafa tanteraka & misaraka amin'ny anaran 'ny bibi-dia sy ny isa 666? Ary inona marina no anaran'ny bibi-dia ihany? Moa ny olona, ​​firenena, maromaro ny firenena, na ny fiangonana? Ary ahoana ny marika izany-no ara-bakiteny, ara-batana MARK? Sa izany fa manana an'ohatra, heviny ara-panoharana?
Aoka isika hanomboka eny amin'ny fikatsahana ny hamaly ireo fanontaniana ireo amin'ny alalan'ny voalohany fiverenana amin'i Apokalypsy 13: 16-17. Eto isika dia nilaza fa ny bibi-dia "tsy maintsy ny rehetra-ny kely na ny lehibe, na ny manan-karena na ny malahelo, malalaka sy andevo-mba homena ny marika eo amin'ny tànany ankavanana na eo amin'ny handriny. Ary tsy misy afaka hividy na hivarotra na inona na inona tsy misy izany MARKA, izay na ny anaran'ny bibi-dia na ny isan'ny  maneho NY ANARANY "(DIEM). Koa amin'izany Soratra Masina izany no mahatonga azy mazava tsara fa ny mariky ny bibi-dia tsotra na ny anaran'ny bibi-dia, na ny isan'ny izay maneho ny anarany. Noho izany, manana ny mariky ny bibidia eo aminao no misy mitovy amin'ny manana ny anaran'ny bibi-dia anao (na ny isa izay maneho ny anarany-666!).
Nahoana anefa ny isa 666? Ahoana no misolo tena isa ny anarany? Eny ary, andao aoka ny Baiboly hamaliana izany. Apokalypsy 13:18 (lb) - "... ny isa soatoavina ny taratasy tamin'ny anarany hanampy 666." mazava tsara io andinin-teny mampiseho fa 666 fotsiny ny isa isa hasarobidin'ny ny anaran'ny bibi-dia! Ohatra, raiso ny anarana "VIX." Raha mampiasa "tarehimarika romanina" dia V = 5, I = 1, & X = 10. Ary raha hametraka ny isa ilaina ny taratasy tsirairay avy amin'izany anarana (5 + 1 + 10) isika, mahazo 16. noho izany, Vix tsy mety ho ilay bibi-dia, satria ny anarany ihany no manampy hatramin'ny 16 (raha ny anaran'ny bibi-dia hanampy hatramin'ny 666). Fa raha tsy Vix dia ny bibi-dia, izay?
IZA ILAY BIBI-DIA?
Koa iza indray moa Izao Beast (i.e. ny Antikristy)? Moa ny United Eoropa Superpower (ho velona indray "Masina" Fanjakana Romanina) toy ny sasany hampianatra? Sa ilay bibi Mpitarika ity tontolo velona indray? Ary ny bibi-dia an'ohatra roa, na ny fanjakana sy ny mpitarika! Fa voalohany indrindra dia mijoro ho ny mpitarika azy. Mba hanaporofoana fa mijoro ho amin'ny farany-fotoana mpitarika ara-politika ity tontolo ho avy tsy ho ela-dia aoka ny mitodika any hafa Soratra Masina ao amin'ny bokin'ny Apokalypsy. Apokalypsy 19: 20- "Ary ny bibi-dia voasambotra, ary niaraka taminy ny mpaminany sandoka .... Roa ireo dia natsipy velona ho any amin'ny farihy afo mirehitra solifara izy roroa "(NKJ). Ity Soratra Masina dia mampiseho mazava fa ny bibidia iray andro farany olona, ​​fa dia izy sy ny mpaminany sandoka dia hatsipy any amin'ny farihy afo!
ARA-BAKITENY, ARA-BATANA MARK?
Fa inona marina no mariky ny bibi-dia, ny mariky ny andro farany ity mpitarika ara-politika? Moa ve izany ho ara-batana, ara-bakiteny MARK (na dia marika ity fanoharana fotsiny, manana karazana nafenina, mifono zava-miafina dikany)?
Ny mariky ny bibi-dia antoka ho ara-bakiteny marika ara-batana! Ao amin'ny Apokalypsy 13:16 & 14:11 maro samy hafa ao amin'ny Baiboly fandikan-teny (GW, NOG, EXB, NEB, & ny Kat) fanjakana fa ny mariky ny bibi-dia ho "marika" eo amin'ny olombelona. Ny AMPC, DIEM, & ny EXB fanjakana fa ny mariky ny bibi-dia nanorotoro ny olona. Fa Tiako ny fomba mandika Baiboly ny Velona andininy roa ireo ny tsara indrindra, araka ny manambara fa ny mariky ny bibi-dia ho "tatoazy" ao amin'ny olombelona! Fa na inona na inona raha ny mariky ny bibi-dia notombohina tamin'ny vy, tsy laniny, na ny tatoazy, ireo fandikan-teny rehetra niara-manaiky fa ny marika ara-bakiteny ho BATANA MARKA fa ny hafa dia mora foana ho afaka hahita!
MANDRAY MARKA = HIVADIKA SATANA!
Raha mamaky ny bokin'ny Apokalypsy tena tsara (indrindra fa ny toko faha-14) dia ho tsikaritrao fa na iza na iza izay VONONA mandray ny mariky ny bibi-dia ho voasazy mafy noho Andriamanitra. Fa Andriamanitra tokoa Tsy hamaly ny olona iray izay manana marika io voatery aminy ara-batana, na dia Izy hamaly olona iray izay tsy nahy no mandray io marika (toy ny sasany tsikombakomba mampianatra)! Ny olona manana ny minia, VONONA MANAIKY MIHITSY NY MARK.
Fa izay tsitrapo sy minia mamela ny mariky ny bibi mba hapetraka ny na ny vatany (na eo amin'ny tànany ankavanana na eo amin'ny handriny) no handeha mivantana an'Andriamanitra! Fa tsy nankatò ny Mpamorona, dia tokony ho nankatò i Satana! Izy ireo amin'ny ankapobeny ho pledging ny tsy hivadika sy ny tsy fivadihany tamin'i Satana Devoly (jereo Apok 13:16 in na ny DIEM & EXB fandikan-teny ao amin'ny Baiboly)! Ary ireo izay manao izany dia ho voasazy mafy noho Andriamanitra! Ary izy ireo dia tsy manan-kalahatra, fa tsy hisy vavolombelona roa (na ny mpaminany) izay milaza azy ireo tsy mba miankohoka eo anoloan'ny bibi (na ny sarivongana) na mandray ny marika, fa nisy anjely avy tany an-danitra Ary hodidiako ny mponina amin'izao tontolo izao tsy mba manao toy izany (Apokalypsy 14: 9)!
Noho izany, inona no anaran 'ny bibi-dia? Ary iza no izao andro farany mpitarika ara-politika ho? Na iza na iza izy, zavatra iray fantatsika azo antoka, ny taratasy ny anarany dia hanampy hatramin'ny 666! Fa mety misy mieritreritra ny tsara kokoa noho ny ROMANINA anarana?
Voalohany indrindra, "ROMANINA" dia azo adika hoe "LATEINOS" ao amin'ny teny grika. (Fa nahoana no mampiasa ny teny grika? Satria ny ankamaroan'ny amin'ny Testamenta Vaovao tany am-boalohany nosoratana tamin'ny teny grika, anisan'izany ny bokin'ny Apokalypsy). Ao amin'ny teny grika "L" mampiseho ny isa 30, "A" dia 1, "T" dia 300, "E" dia 5: "Izaho" dia 10, "N" dia ny 50, "O" dia 70, ary " S "no 200. Add azy (30 + 1 + 300 + 5 + 10 + 50 + 70 + 200) ary inona no mahazo? 666!
Faharoa, raha ny anarany dia "ROMANINA," dia ho toy izany koa ny amin'ny Andriamanitra telo izay iray ho foto-pampianarana araka ny telo hisolo tena zavatra iray. Tsy vitan'ny hoe mety ho ny anaran 'ity-fotoana farany mpitarika ara-politika, fa izany koa no hisolo tena ny Fanjakana Romanina, ary koa ny Romanina (Katolika) Fiangonana.
Na inona na inona ataonao amin'ny hoavy, ka tsy (na inona na inona toe-javatra na inona na inona!) Mandray ny mariky ny biby na hivavaka aminy (i.e. ny Antikristy) na ny sarivongana !!!
"Rankizy, izao no ora farany; ary tahaka ny efa renareo ... ny antikristy ho avy ... Ny olona ny ota ... ny zanaky ny fahaverezana, izay manohitra ka manandra-tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra, na izay ivavahana ... Ho mihitsy aza mipetraka ao ny tempolin'Andriamanitra, nilaza ny tenany ho Andriamanitra "(1 Jaona 2:18 NKJ, 2 Tes. 2: 3-4 NKJ; 2 Tes. 2: 4 DIEM).
"Avy eo izy dia nanokatra ny vavany hiteny ratsy an'Andriamanitra izy, dia ny hiteny ratsy ny anarany, ny tabernakely, ary ireo izay mitoetra any an-danitra. Ary navela ho azy mba hiady tamin'ny olona masina [TENA Kristianina] sy handresy [handresy] azy ireo. Sy ny fahefana nomena azy ny isam-pirenena, samy hafa fiteny, ary ny firenena. Ary izay rehetra monina ambonin'ny tany hivavaka aminy, izay ny anarany no tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ... "(Apokalypsy 13: 6-8 NKJ).
"Raha misy miankohoka eo anoloan'ny bibi [i.e. ny Antikristy] sy ny sariny [i.e. ny sarivongana], ka mandray ny marika eo amin'ny handriny na amin'ny tànany, dia izy koa no hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra, izay naidina hery feno ho any amin'ny kapoaky ny fahatezerany. Ary hampijalina amin'ny afo sy solifara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny Zanak'ondry [i.e. Jesoa Kristy]. Ary ny setroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay mandrakizay; ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohoka eo anoloan'ny bibi-dia sy ny sariny, na izay mandray ny mariky ny anarany "(Apokalypsy 14: 9-11 NKJ).
Raha mila fanazavana fanampiny momba ny mariky ny bibi-dia, azafady vakio "Apokalypsy Tonga Velona", ary "Ny antikristy & The Farany 7 taona." Ireo boky azo alaina maimaim-poana ao amin'ny: www.TheBibleComesAlive.com
Raha te-hamaky na ny lahatsoratra na boky amin'ny fiteninao, tsindrio fotsiny ny rohy manaraka ity: https://translate.google.com. Ity rohy ity dia handika ny asa sorany rehetra avy amin'ny teny anglisy ny teny. Fa mety ihany mandika 1 pejy amin'ny fotoana.